အမဲကြော်နှပ် | Colourful Recipes
← Beef and potato curry
2 comments on “အမဲကြော်နှပ်”
December 4, 2012 @ 8:14 pm
I really enjoy this dish. I will get some beef next time I go grocery shopping, to try this recipe again the way it is printed. Thanks for posting suchagreat recipe.
December 5, 2012 @ 7:24 pm
အပြောင်းအလဲအနေနှင့် အိမ်မှာ ဒီနေ့ ကြော်ပီး ဟင်းအဖြစ် ချက်ကြည့်တာ စားလို့ကောင်းတယ် .. အမ … ကျေးဇူး။